Art is My Life: February 2008
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:01 PM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကျွန်ုပ်ကို အချဉ်ဟု မထင်စေလို၊ မချဉ်၍ ချိုသလားလို့ မေးရင် ခါးချင်ခါးပါလိမ့်မည် စပ်ချဉ်စပ်ပါလိမ့်မည်။ သေချာသည်ကတော့ ကျွန်ုပ်သည် အချဉ်မဟုတ်၊ နန္ဒာလှိုင် မောင်မျိုးမင်း ဖိုးကျော် ရန်အောင် အစရှိသူတို့၏ ကျေဇူးရှင်ဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အထက်ပါ လူများ အကယ်ဒမီယူစဉ်က ပရိတ်သတ်များသည် သူတို့၏ ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်သည်ဟု ရုပ်မြင်သံကြားမှ တစ်ဆင့် တစ်နိုင်ငံလုံး သိအောင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကား ထိုသူများ၏ ပရိတ်သတ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့၏ ကျေးဇူးရှင်သည် ကျွန်ုပ်ဖြစ်ချေတော့သည်။
နောက်တစ်ခု ထပ်ပြောရမည်ဆိုပါက၊ အငြိမ်းစားယူသွားသော ကိုဖီအာနန်၏ အလုပ်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီး ဘန်ကီးမွန်း၏ လက်ရှိအလုပ်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်ဟု ပြောလျှင်ကား မှားလိမ့်မည်မဟုတ်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော လူသားများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်ရှင်များ ဖြစ်သည်ဟု ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ မကြာခဏပြောခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည် လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်သည် ထို့ကြောင့် ကိုဖီအာနန် ဘန်ကီးမွန်း အစရှိသော လူများ၏ အလုပ်ရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။
လူများသည် အရူးများဖြစ်သည်ဟု ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က ဟောကြားခဲ့ဖူးသည်ဟု ပြောကြသည်။ တကယ်ဟောခဲ့သည် မဟောခဲ့သည်ကိုတော့ ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာ မသိပါ။ သို့ရာတွင် လူများသည် အရူးများ ဖြစ်သည် ဆိုသည်ကိုတော့ အားလုံးက လက်ခံကြသည်။ သို့ဆိုပါလျှင် လူအားလုံးသည် ဘာကြောင့် ရွာသာကြီးကို မသွားကြသနည်း။
လူများသည် ကျီးအာသီးကို တွေ့လျှင် အဆင်းသာရှိပြီး အချင်းမရှိသည့် အသီးဟု ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချကြသည်။ အဆိုးမြင်ဝါ ဒီသမားများသည် ဖန်ခွက်ထဲတွင် ရှိသော ရေတစ်ဝက်ကို ရေတစ်ဝက်ပဲရှိသည်ဟု ပြောကြသည်။ အကောင်းမြင်ဝါဒီ သမားများသည် ဖန်ခွက်ထဲတွင် ရှိသော ရေတစ်ဝက်ကို ရေတစ်ဝက်ကြီးတောင် ရှိသေးပါလားဟု ပြောကြသည်။ သို့ဆိုလျှင် ကျီးအားသီးကို အထဲက အနှစ်မရှိပေမယ့် တော်တော်လှတဲ့ အသီးလေးပဲ ဟုဘာကြောင့် မပြောကြသနည်း။
အဆိုးမြင်သမားနှင့် အကောင်းမြင်သမားကို ဖန်ခွက်ထဲက ရေတစ်ဝက်စံနှင့် ပြောဆိုရမည်ဆိုပါက ကျီးအာသီးကို အဆင်းသာရှိ၍ အချင်းမရှိသော အသီးဖြစ်ဟု ပြောကြသူများသည် အဆိုးမြင်ဝါဒီသမားများ ဖြစ်ကြသည်။
လူအချို့သည် သရဲကားများကို ကြည့်ရင်းကြောက်သည် ကြောက်သည်ဟု ပြောကြသည်။ သို့ရာတွင်း ကြည့်လက်စ သရဲကားကို ပိတ်ပစ်ခြင်း မရှိကြ။ အမှန်အကန် ကြောက်သူသည် ကြည့်ဖို့ဝေးစ ထိုအသံကိုပင် မကြားချင်ကြပေ။ ထို့ကြောင့် ကြည့်ရင်း ကြောက်သည်ဟု ပြောသောသူများသည် အမှန်အကန် မကြောက်သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်သည် လူ့လောကကြီးကို လွန်စွာစိတ်ပျက်မိသည်။ လူ့လောကကြီးမှာ နေရတာ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းသည်ဆိုသည့် အတွေးကို တစ်ပတ်လျှင် ဆယ်ကြိမ်ထက် မနည်းတွေးမိသည်။ အဲလောက်တောင် စိတ်ပျက်နေလျှင် အဆိပ်သောက် သေလိုက်ပါလားလို့ အကြံပေးရင် ကျွန်ုပ်ခေါင်းခါမိလိမ့်မည်။ လူလောကသည် စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ အတိပြီးသော်လည်း လူ့လောကြီးက ထွက်ခွါသွားရမည်ကိုတော့ လိုလားခြင်း မရှိ။
ကျွန်ုပ်သည် ကြောက်သော သရဲကားကို မပိတ်ရက်ပဲ ဆက်ကြည့်နေသူ တစ်ယောက်ကဲ့သို့ နေရတာ အလွန်စိတ်ပျက် ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော လူ့လောကကြီးကို စိတ်ပျက်သည်ဟု ပြောရင် ငြီးညူရင်းဖြင့် အသက်ဆက်လက်ရှင်သန်လျှက် ရှိသည်။
ယနေ့လည်း အသက်ရှင်နေသည်။ မနက်ဖြန်လည်း အသက်ရှင်ဦးမည်။ ဘယ်နေ့ အထိအသက်ရှင် မည်နည်းဟု လာမေးလျှင် ကျွန်ုပ်တွင် ဖြေစရာ အဖြေတစ်ခုရှိသည်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:50 PM3ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကမ္ဘာမြေနဲ့ကြယ်စင် မိုင်တွေသန်းချီလို့ ဘယ်လောက်ပင် ဝေးပါစေ၊ ညအခါမှာ မိတ်တုပ်မိတ်တုပ် အလင်းရောင်လေးတွေက ကောင်းကင်မှာ ကြယ်စင် ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်တယ်။
နင်နဲ့ငါ မိုင်တွေရာချီလို့ ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးနေပါစေ၊ နင့်နာမည်ကြားရုံနဲ့ နှလုံးသားတွေ တစ်ဆတ်ဆတ် တုန်နေတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ငါ့ရင်ထဲမှာ နင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ငါအမြဲသိခဲ့တယ်။
ချစ်သူ . . .
ကမ္ဘာကြီးကို တိမ်တိုက်တွေက ဖုံးအုပ်ပြီး လည်ပတ်နေသလို၊့ ရင်ထဲမှာ နင့်ကိုချစ်တဲ့ စိတ်တွေက ငါ့နှလုံးသားကို လွှမ်ခြုံပြီး ထာဝရ လည်ပတ်နေတယ်။
ချစ်သူ. . .
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ . . .
ဖြည့်ဆည်းခွင့်ရနေရင် . . . . .
အဲဒီပီတိကို . . .
အဲဒီပီတိတစ်ခုအတွက် အရာအရာကို စွန့်စားရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ရှိနေခဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ ချစ်သူ . . .
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 6:12 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ငါဟာ ကျောက်ခတ်က လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရင် . . .
ချစ်တယ်. . . . လို့ ပြောဖို့ ဘာသာစကားရှိမှာ မဟုတ်ဘူး
ချစ်တယ်. . . . လို့ ရေးပြဖို့ စာရွက်တွေရှိမှာ မဟုတ်ဘူး
ချစ်သူ. . . .
တကယ်တော့ စကားဆိုတာ အဓိပ္ပယ်ရှိသော နုတ်ထွက်အသံ တစ်ခုပါ
ဒါကြောင့် နင့်ကို ချစ်တယ်. . . လို့ပြောဖို့ ဘာသာစကား မရှိတဲ့
ငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ တဒိတ်တဒိတ်နဲ့ မြည်နေတဲ့ နှလုံးခုန်သံတွေ ကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
ချစ်တယ်လို့ . . .
အဓိပ္ပယ်ရတဲ့ အသံတွေပေါ့ ချစ်သူရယ်
အဲဒီထက် အဓိပ္ပယ်ရှိတဲ့ အသံ လောကမှာ ရှာလို့ရှိပါ့ဦးမလားကွယ် . . . .
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 5:52 PM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော်လူ့လောကကို ရောက်ရှိတာ ၂၃ နှစ်ပြည့်သွားပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ဆယ့်သုံးနှစ် ၁၉၈၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ကျွန်တော့်ကို စစ်ကိုင်းတိုင်း အင်းတော်မြို့နယ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
တစ်နှစ်ကို ၃၆၅ ရက်နဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင် ၈၃၉၅ ရက် အကြာ လူ့လောကမှာ ကျွန်တော်နေထိုင် အသက်ရှင်ခဲ့ပြီး ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လူ့သက်တန်းကို ပျမ်းမျှခြင်း အသက် ၇၀ နဲ့တွက်ကြည့်ရင် လူတစ်ယောက်ဟာ ရက်ပေါင်း ၂၅၅၅၀ ရက်နေထိုင်ခွင့် ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍များသာ ကျွန်တော်သာဟာ အသက် ၇၀ အထိ လူ့လောကကြီးမှာ နေထိုင်ခွင့် ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်အတွက် အသက်ရှင် နေထိုင်ဖို့ ၁၇၁၅၅ ရက်ကျန်ရှိဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်တွေနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် အသက် ၇၀လောက် အထိ နေထိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာ ကြာတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ရက်အနေနဲ့ တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်အတွက် သိပ်မကျန်တော့သလိုပဲ ခံစားရတယ်။
တစ်ရက်ကို ပိုက်ဆံ တစ်ကျပ်လို့ သဘောထားပြီး တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ရဲ့ မှုလ ပိုင်ဆိုင်မှု ငွေကြေးဟာ နှစ်သောင်းခွဲကျော်ရှိခဲ့တယ်။ သုံးရင်းသုံးရင်းနဲ့ အခုဆိုရင် ငွေရှစ်ထောင်ကျော် ကိုသုံးခဲ့ပြီးပြီ။ ၀ယ်စရာတွေကလည်း အများကြီး ကျန်နေသေးတယ်။ သေချာတာတော့ ကျွန်တော့်မှာ နောက်ထပ် ၀င်ငွေမရှိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျန်တဲ့ တစ်သောင်းခု နှစ်ထောင်ကျော်ကို ကိုယ့်အတွက် Save ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားရတော့မယ်။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် တကယ်လိုအပ်တဲ့ အရာတွေကိုပဲ ၀ယ်ရတော့မှာပေါ့။
တကယ်တော့ လူ့လောကကြီးကလည်း အကန့်အသတ်နဲ့ ရတဲ့ လစာလိုပဲ၊ လောကမှာ နေထိုင်ခွင့် အချိန်ဆိုတာ အကန့်အသတ်လေးနဲ့ ရခဲ့တာပေါ့။
လူ့တစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကို နှစ်နဲ့ တိုင်းတာတယ်။ နှစ်ဆိုတာ လ တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ။ လဆိုတာ ရက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ။ ရက်ဆိုတာ နာရီတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ။ နာရီတွေကို တစ်နည်းအားဖြင့် အချိန်လို့ ခေါ်တယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီးနေခြင်းဟာ အသက်တွေကို ဖြုန်းတီးနေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
အဲလို သိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော့်အသက်တွေ အများကြီး ဖြုန်းတီးခဲ့ပြီးပြီ..............
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:53 PM9ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
၁၉၉၀ ၀န်းကျင်ခန့် က ( ကောလင်းမြို့နယ် ကြို့ခုန်ရွာ)
ညီလေး မမ ကျွန်တော် (အင်းတော်မြို့)
ငယ်ငယ်တုန်းကစာတော်တယ် (ကျော်ဇေယျာ အမက)
တပ်မတော်နေ့ အထိမ်းမှတ်ကဗျာပြိုင်ပွဲ ၊ မြို့နယ်အဆင့်ပထမ (ဆယ်တန်းနှစ်က)
YangonMediaGroup နှစ်ပတ်လည် (2007ဇန်န၀ါရီ)
ကွမ်လုံမြို့နယ် (2007 နိုဝင်ဘာ)
သူများအိမ်မှာ သူများကွန်ပျူတာနဲ့ :P
ကျွန်တော်နဲ့ တစ်ရက်တည်းမွေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် (Abraham Lincoln 1809)
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:46 PM4ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရည်ညွှန်း: ကိုယ်ရေးကိုတာ, မွေးနေ့ဆုတောင်း
ဒီနေ့ဟာ တီထွင်သူ ပါရဂူကြီး Thomas Edison ရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ တီထွင်မှု အမျိုးပေါင်း တစ်ထောင်ကျော် ရှိပြီး သူတီထွင်မှုတွေထဲမှာ အကြော်ကြားဆုံး တီထွင်မှုကတော့ လျှပ်စစ်မီးလုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သောမတ်အက်ဒီဆင် ရဲ့ ကျေးဇူး ရောင်ခြည်တွေက တကမ္ဘာလုံးကို လွမ်းခြုံထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ ညပိုင်းမှာ အလင်းရောင်ကို ရရှိနေခြင်းဟာ အက်ဒီဆင်၏ ကျေးဇူးများ ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ (မီးပျက်သော ညများမပါ)
သူ့အကြောင်းကိုတော့ ကျွန်တော် ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျောင်းစာအုပ်တွေထဲမှာ သင်ကြားခဲ့ရပြီးဖြစ်လို့ ထွေထွေထူးထူး ပြောဖို့ မလိုတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ......
သူဟာ လျှပ်စစ်မီးလုံးကို စိတ်ကူးရလို့ စတီထွင်ထွင်ခြင်းမှာ အောင်မြင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ အကြိမ်ခြောက်ထောင် ကျော်မှ သူ့လျှပ်စစ် မီးလုံးကို အောင်မြင်စွာ တီထွင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ သူလျှပ်စစ်မီးလုံးကို အောင်မြင်စွာ တီထွင်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ မီးလုံးမဖြစ်လာသေးတဲ့ လျှပ်စစ်မီးလုံး အပျက်တွေကို ကားနဲ့ တိုက်ထုတ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူလျှပ်စစ်မီးလုံးကို အောင်မြင်စွ တီထွင်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ “ မီးလုံးတစ်လုံး အောင်မြင်ဖို့ မအောင်မြင်တဲ့ အကြိမ်ရေ ခြောက်ထောင် ကျော်လောက် ရှိခဲ့တာပေါ့” လို့ သူ့ကို ပြောကြတဲ့အခါ၊ “ အဲဒီအကြိမ်ရေ ခြောက်ထောင်ဟာ မအောင်မြင်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ လျှပ်စစ် မီးလုံး လုပ်လို့မရတဲ့ နည်းလမ်းခြောက်ထောင်ကို အောင်မြင်စွာ ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့တာပါ” လို့ သူက ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘ၀မှာလည်း လျှပ်စစ်မီးလုံး တီထွင်သလိုပါပဲ။ ဘ၀ကို အောင်မြင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခါမှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကျရှုံးဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ မအောင်မြင်တဲ့ နည်းကို သိရင် နောက်တစ်ခါ အဲဒီအတိုင်း မလုပ်ပဲ တစ်ခြားနည်းလမ်း တစ်ခုကို ပြောင်းလုပ်ကြည့်သွားလို့ ရနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ရှင် သောမတ်အက်ဒီဆင်ဟာ 1847 ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး 1931 အောက်တိုဘာလ 18 ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့အထိသာ အသက်ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင် 161 တစ်နှစ် ပြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဖေဖော်ရီ ဆယ်ရက် အစွန်းပိုင်းကာလမှာ အက်ဒီဆင် လင်ကွန်း မြန်မာလွတ်လပ်ရေး ဘိသုကာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အစရှိတဲ့ လူသားအကျိုးပြု ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မနက်ဖြန်မှာလဲ လူသားအကျိုးပြု ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ကို ဆက်လက်တင် ပြသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုက် ပါရစေ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:22 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
အဒေါ်အိမ်ကို ရောက်ပြီဆိုသည်နှင့် ကြောင်များက ၀ုန်းဒိုင်း ဆန်နေသည်။ အဒေါ်အိမ်တွင် ကြောင်ကြီး ကြောင်လတ် ကြောင်သေး ကြောင်မွေးစပါက် အစရှိသဖြင့် အမျိုးအစား စုံလင်လှသည်။ ထိုသို့ အမျိုးစား စုံသော ကြောင်များကို စီးပွားတက်သည်ဟူသော အယူဆတစ်ခု တည်းဖြင့် မြောက်စားထား ခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ခန့်က အဒေါ်အိမ်သို့ ကြောင်ဝါမလေး တစ်ကောင်ရောက်လာသည်။ ထိုကြောင်မလေး ရောက်လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကြောင်များ တစ်သုတ်ပြီး တစ်သုတ် မွေးဖွားခဲ့ရာ ယခုအချိန်တွင် ကြောင် အကောင်နှစ်ဆယ် ကျော်သွားပြီး ဖြစ်သည်။
ကြောင်မွေးသည် ဆိုသည်က လွယ်သည့် အလုပ်တော့ မဟုတ်။ ကြောင်များကို နံနက် နှင့် ညနေတွင် ငါးပုစွန် အစရှိသည့် အသားဟင်း နှင့် ကျွေးရသည်။ ထို့ပြင် ကြောင်များတွင် ရာသီအလိုက် ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ရန် အချိန်ရာသီအလိုက် တိရိစ္ဆာန် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆေးထိုး ပေးရသေးသည်။ ညပိုင်းတွင် ကြောင်များအတွက် ညလည်စာ အစာခြောက် ကိုကျွေးရသေးသည်။ ထိုကဲ့သို့ တိုင်ပင်ကိုက်အောင် ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်နိုင်မှသာ ကြောင်များသည် ကြီးထွားပြီး လှလှပပနှင့် ရောဂါကင်းသည်။
တစ်ရက်တွင် အစ်မဖြစ်သူက အိမ်ပြန်လာလျှင် ကြောင်စာ ၀ယ်လာရန် ကျွန်တော့်ကို မှာလိုက်သည်။ ကြောင်စာဆိုသည်မှာ ထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ပါ ရပ်ကွပ်ထိပ် ဈေးအတွင်းမှ ငါးများ သာဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် လက်ရှိတက်နေသော သင်တန်းက ညနေ ငါးနာရီတွင် ဆင်းသည်။ ဘတ်စ်ကားစီးသည့် အချိန်နှင့် တွက်လိုက်ပါက ညခုနှစ်နာရီခန့်တွင် အဒေါ်အိမ်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့စွန်ရှိ ရပ်ကွက်သို့ရောက်သည်။
ကျွန်တော် ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဆင်းတော့ ရပ်ကွက်ထိပ် တွင် ဖရောင်းတိုင် တို့ဖြင့် အတိပြီးသော ဈေးတန်းလေးမှာ ကျိုးတိကျိုးကြဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် ထိုကျိုးတိကျိုးကြဲဖြစ်နေသော ဈေးတန်းလေးကို ဖြတ်၍ အိမ်သို့ ပြန်ရမည် ဖြစ်သည်။
ထိုဈေးတန်းလေးသည် ကျွန်တော်တို့ အဒေါ်များ နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်ထိပ်တွင် တည်ရှိပြီး ညနေပိုင်း ရုံးဆင်းချိန်တွင် ဈေးဝယ်သူများ နှင့် တော်သင့်ရုံစည်ကား သောဈေးလေးတန်းလေး တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယခု အချိန်တွင်တော့ မိုးအနည်းငယ် ချုပ်နေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ရောင်းသူ ရောဝယ်သူပါ ကျဲပါးနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် ထိုဈေးတန်းကို ဖြတ်လျှောက်စဉ် ငါးဝယ်နေသူများကို တွေ့တော့မှ မနက်က အမဖြစ်သူ မှာလိုက်သည့် ကြောင်စာကို သွားသတိရသည်။ ထို့ကြောင့် လက်နှစ်လုံး အရွယ်ခန့်ရှိ အမျိုးအမည်မသိ ငါးများကို ဈေးပေါပေါနှင့်ရသောကြောင့် ကြောင်စာအဖြစ် ၀ယ်လာခဲ့သည်။ အိမ်ရောက်တော့ ကျွန်တော် ၀ယ်လာသော ငါးများကို အစ်မဖြစ်သူအား ပေးလိုက်သည်။
“ဟင်. . . နင်ဝယ်လာတဲ့ ငါးတွေက အပုတ်နံ့ထွက်နေတယ်” ဟု အစ်မဖြစ်သူက ငါးများကို ရေဆေးရင်း လှမ်းပြောသည်။ ကြောင်စားမှာပဲဟာကို အပုတ်နံ့ထွက်တော့လဲ ဘာဖြစ်လဲဟု ကျွန်တော်က ပြန်ပြောလိုက်သည်။
“ကြောင်တွေက အပုတ်နံ့ထွက်တဲ့ငါးတွေဆိုရင် မစားဘူး” ဟု အစ်မက ပြန်ပြောသည်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ထိုနေ့က မိုးလည်း ချုပ်သွားပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုငါးများကိုသာ ကြောင်စာအဖြစ် ချက်လိုက်ရသည်။
နောက်နေ့ နံနက်ရောက်တော့ မနေ့ကချက်ထားသော ငါးဟင်းများဖြင့် ကြောင်များကို အစာကြွေးသည်။ ကြောင်များသည် ထိုငါးဟင်းများဖြင့် နယ်ထားသော ထမင်းကို အနည်းငယ်သာ စားပြီး ဆက်မစားပဲနေကြသည်။ အချို့ကြောင်များကတော့ နမ်းရုံသာ နမ်းပြီး လုံးဝ မစားပဲနေကြသည်။
အဲတော့မှ သိလိုက်သည် ငါးတွေက အပုတ်နံ့ထွက်ရင် ကြောင်တွေ မစားဘူးကိုး။ ဒီလိုဆိုရင် ကြောင်တွေတောင် မစားတော့တဲ့ ငါးကို ဘာဖြစ်လို့ရောင်းနေရ ရပါလိမ့်ဟု ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း စဉ်းစားနေမိသည်။
ထိုသို့စဉ်းစားရင်း ကျွန်တော် သတိရသွားသည်။ ကျွန်တော် ပုတ်စပြုနေပြီဖြစ်သော ခပ်ရိရိ ငါးများကို ၀ယ်စဉ်က ကျွန်တော်တစ်ယောက် တည်းမဟုတ်။ ကျွန်တော်ဘေးတွင် ထိုင်ကာ ခပ်ရိရိ ငါးပုံထဲက ပိုလတ်မည်ထင်သော ငါးများကို ရွေးနေသည့် အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦးကို သတိထားမိသည်။ ထိုအမျိုးသမီးကြီးသည် ဘာအလုပ်လုပ်ကိုတော့ ကျွန်တော်သေ ချာမသိသော်လည်း ခေါင်းရင်းအိမ်တွင် အ၀တ်လာလာ လျှော်ပေးသည်ကိုတော့ ရံဖန်ရံခါတွေ့ဖူးသည်။
ထိုနေ့က ပုတ်စပြုနေသော ငါးများကို ကျွန်တော်ကတော့ ကြောင်ကျွေးရန်အတွက် ကြောင်စာ အဖြစ်ဝယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ထို့ကဲ့သို့ အပုတ်နံ့ထွက်နေသော ငါးများကို ကြောင်များ မစားပါ။ ထိုကဲ့သို့ ကြောင်များမစားသော ငါးများကို ထိုအမျိုးသမီးကြီးသည် ဘာအတွက် ၀ယ်နေသည်မသိ။
ကျွန်တော်သိသလောက် သူတို့အိမ်မှာ ကြောင်တွေ မရှိကြပါ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:49 AM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:35 PM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဘလော့ဂ်ဂါ မောင်နှမတွေအကြား ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ စနောက်ကြရင်း "မြို့စားကြီးနေဘုန်းလတ်" လို့ နာမည်တွင်ခဲ့တဲ့သူ။ မနှစ်က ဒီလိုနေ့မှာပဲ"လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်" ဘလော့ဂ်လေးကို သူကိုယ်တိုင် အသက်သွင်းခဲ့တယ်။ဒီနေ့ တော့ တစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်သွားပြီပေါ့။ မှတ်မှတ်ရရ သူ့ ဘလော့ဂ်မှာ ပထမဆုံးတင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်နာမည်ကလည်း "လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်"တဲ့။ လက်တွေ့ဘဝမှာ သူလွတ်ကျခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ၊ ဒါမှမဟုတ် အနုပညာသမား ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေ အတွက် သူ့ ဘလော့ဂ်ဟာ သစ္စာရှိတဲ့ လူယုံ၊ အစွမ်းထက်တဲ့ လက်နက်၊
အရိပ်ကောင်းတဲ့ ညောင်သစ်ပင်လို အသုံးတော်ခံခဲ့တယ်။ ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်အတွင်းမှာ သူ့ မြို့တော်က စာကောင်းစာသန့် ၁၂၂ ပုဒ်
မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီစာတွေကြောင့် ဖတ်သူတွေအတွက် သုတပန်းတွေ လန်းလာခဲ့တယ် ၊ ရသလမ်းတွေ ဆန်းလာခဲ့တယ် ၊ ပညာမီးတွေ လင်းပလာခဲ့တယ် ။ သူကတော့ သတိထားမိချင်မှ ထားမိလိမ့်မယ်။
ဘလော့ဂ်ဂါတွေ အတွက် ပထမဆုံးဆိုတဲ့ စကားလုံးတော်တော်များများမှာ သူနဲ့လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်လည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်။
ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေကို ပထမဆုံး ပုံနှိပ်မယ့်စာအုပ်အတွက် တက်တက်ကြွကြွနဲ့ သူ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ စာအုပ်ကိစ္စ ဆွးနွေးပွဲတိုင်းကို မပျက်မကွက် တက်ရောက်ခဲ့ သူဟာလည်း သူ တစ်ဦးတည်း ရှိခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး ရန်ကုန်မှာ ပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ Blog Day Seminar အတွက်လည်း သူ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ MRTV4 နဲ့ အခြားသော မီဒီယာတွေအကြားမှာ ဘလော့ဂ်လောက အကြောင်းကို သူချပြရဲခဲ့တယ်။ ဝေဖန်မှုတွေကို လက်ခံခဲ့တယ်။ မေးခွန်းတွေကို အပြုံးနဲ့ ဖြေကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါရပ်ဝန်းမှာ ဓလေ့ထုံးတမ်းတစ်ခုရှိတာက ဘလော့ဂ်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဘလော့ဂ်ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ ထိမ်းအမှတ် နေ့တွေမှာ အထူးရေးသားတဲ့ ပို့စ်တွေ တင်တတ်ကြတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေက လာနှုတ်ဆက်ကြတယ်၊ Comment တွေ
ဒီနေ့ သူ့ ရင်နဲ့ တည်ထားတဲ့ မြို့တော်ကြီး တစ်နှစ်ပြည့်တယ်။ ခုလိုအချိန်မှာ သူသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးသားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်
သူ့ဘလော့ဂ်အတွက် အထိမ်းအမှတ်ပို့စ်တင်မယ့် အစီအစဉ်ရှိမယ်ဆိုတာ အသေအချာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ … ဘယ်မှာလဲ ။ သူရေးမယ့် ပို့စ်မှာ Comment ရေးဖို့ ဘလောဂါ့ရပ်ဝန်းက သူငယ်ချင်းတွေ သူ့ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်တကြီး စောင့်နေကြတယ်။ " မြို့စားကြီး " လို့ စနောက်ကြဖို့ စောင့်နေကြတယ် … ဇန်နဝါရီ ၂၉ ကတည်းက ခြောက်သွေ့နေခဲ့ရတဲ့ သူ့ မြို့တော်မှာ အပြုံးတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေစေချင်တာ … ရယ်သံတွေနဲ့ စည်ညံနေစေချင်တာ … ဒါတွေအတွက် အားလုံးက စောင့်မျှော်နေဆဲပါ ..။
ဘလော့ဂ်ဂါတွေကို ချစ်ကြည်စေချင်တဲ့ သူ့အတွက်၊ လူငယ်တွေကို ကောင်းစေချင်တဲ့ သူ့ အတွက်၊ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ သူ့ အတွက် ဘေးဒုက္ခဆိုတာ မြူတစ်မှုန်စာတောင် ကျရောက်မလာစေဖို့ ဘလောဂါ့ရပ်ဝန်းမှ ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးက ဒီအမှတ်တရို့စ်လေးနဲ့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:28 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ